Somaliland: Maxa Ku Cusub Magaalada Berbera? Munaasiabadii Dekedda Oo Amaankada L,,, - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Maxa Ku Cusub Magaalada Berbera? Munaasiabadii Dekedda Oo Amaankada L,,,
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil soona gaadhaya Warganenews ayaa waxay sheegayaan in amaanka magaalada Berbera saaka aad loo adkeeyey isla markaana wadooyinka magaalada iyo isgoys kaste oo dekeda Berbera gala lagu soo daadiyey ciidamo tiro badan oo iskugu jira kuwa Booliska iyo Milateriga kuwaas oo si aad u adkaynaya amaanka magaalada.
Ciidamadan ayaa waxay gabi ahaanba baadhayaan gaadiidka iyaga oo sidoo kalena gawaadhida ka celinaya wadooyinka qaar una sheegaya inaan la mari Karin,sidoo kalena xogaha naga soo gaadhaya magaalada Berbera ayaa waxay sheegayaan in afaafka hore ee dekeda magaalada ay la wareegeen ciidamo Milateri.
Munaasibada wareejinta dekeda Berbera ee Dp World ayaa waxay goordhaw ka billaabmaysaa sida naloo sheegay barxada hore ee dekeda magaalada Bebrera,waxaana Berbera goordhaw kusoo fool leh sida ay xoguhu noo sheegeen wasiiro ka tirsan Itoobiya kusoo oo kasoo qayb galaya wareejinta dekeda ee Shirkada Dp World.
Sidoo kalena warbaahinta magaalada Berbera ayaa naloo sheegay in loo diiday inay gudaha u galaan goobta ay munaasibadu ka dhacayso,marka laga reebo telefeeshinka qaranka Somaliland,ilaa hadda lama garanayo sababta warbaahinta loogu diiday goobta munaasibadu ka dhacayso.